बीयर पिएपछि धेरै दूध दिने भैंसी !::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
एजेन्सी, भारतको लखनउमा एक किसानले भैंसीमाथि अनौठो प्रयोग गरेका छन् । उनले आफ्नो भैंसीले बीयर पिएपछि धेरै दूध दिएको दाबी गरे अहिलेसम्म भैंसीलाई पौष्टिक आहार खुवाएर बढी दूध दिएको खबर आउने गरेपनि बीयर पिलाएर धेरै दूध दिनु अचम्म हो ।
‘मैले जब भैंसीलाई बीयर पिलाउन थालें, तब भैंसीले बढी दूध दिन थालेको छ,’ उनले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूसँग भने । उनको दाबीलाई सत्य मान्न नसकिने स्थानीयहरूले बताउँदै आइरहेका छन् । तर बीयर बनाउँदा फ्याँकिने वस्तुले चाहिँ भैंसीलाई पौष्टिक आहाराको काम गर्ने स्थानीय अगुवा कृषकहरूले बताएका छन् ।
‘भैंसीले बीयर होइन, बीयर बनाएपछि बाँकी रहेको वस्तु खाएको हुन सक्छ,’ एक अगुवा कृषकले भने, ‘बीयर दूधभन्दा महँगो पर्छ । त्यसैले धेरै दूध आउने भएपनि बीयर पिलाउनु सही होइन । बीयर बनाएपछि बाँकी रहेको वस्तुमा कार्बोहाइड्रेट बढी हुन्छ ।
महिलाहरुले पैसा ब्लाउजभित्र घु’साएर राख्छन्, किन?
पोखरामा ३ लाख दिदा पनि दिएनन् कुखुराको भाले, जस्को सुरक्षा चितुवाले गर्छ
विचित्र संसार : मतदाता परिचयपत्रमा कुकुरको फोटो
संसारको सबैभन्दा ‘ड`रलाग्दो’ बिरालो, जसको इन्स्टाग्राममा छन् २२ हजार बढी फलोअर्स
जब घरको धाराबाट ‘रेड वाइन’ झर्न थाल्यो